AKHRISO: Qaar kamid ah Saaxiibada M/weynaha PL oo Xildhibaano ka raadsanaya G Mudug, Xili Isbitaalo daawo la’aan ka jirto? – Puntlandtimes
GAALKACYO(P-TIMES)- Madaxtooyada Puntland ayaa dhaqaale badan ku bixinaysa xubno daacad u ah, si ay uga mid noqdaan Xildbibaanada Baarlamaanka Puntland ee la soo xulayo, waxaana in badan oo kamid ah saaxiibada Madaxweyne Gaas loo kala diray gobalada oo dhan, taas oo ka dhigan damaca ku aadan in musharaxnimada Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Mas’uuliyiin ka tirsan Madaxtooyadda ayaa soo gaaray magaalada Gaalkacyo, waxaana ay qabsadeen isu soo baxyo dad iyo munaasabado lacago badan ku baxeen.
Xubnaha taageerada ka helaya Madaxtooyada ee soo gaaray magaalada Gaalkacyo, waxaa ay isugu jiraan kuwo shaaciyay iyo kuwa si hoose howshooda u wata.
GOBALKA MUDUG, XUBNAHA MADAXTOOYADDA:
1- Cabdulaahi Quraan jecel-Afhayeenka Madaxtooyadda
2- Cawil Xasan Daad- Agaasime ku xigeenka Madaxtooyada
3- Daashane-Agaasimaha Mashaariicda
4- Xaaji Sayn-Agaasime ku xigeenka Macdanta
Damaca waqtigan wuxuu ku soo beegmay xili Isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo lagu hungoobay oo laga waayay daaweyn iyo Adeegyadii Isbitaal markii dad ku dhintay ay la xaqiijiyey in ay waayeen in loo shaqeeyo.
Sidaas oo kale Mashaariic laga hirgalin lahaa gobalka Mudug ayaa fashilmay, waxaana ilaa hadda lays weydiinayaa halka uu ku dambeeyey mashruuci Sanduuqa Horumarinta ee G Mudug, oo ay maamulayeen Isimo iyo guddi dawladda ah, kaas oo la xaqiijiyey in Boqolaal Kun dollar oo lagu shubay.
Madaxtooyadda PUntland ayaa sidoo kale dadaal ugu jirta sidii dib loogu soo celin lahaa Xildhibaanada taageersan, kuwa diidana meesha looga saari lahaa.
Sikasataba ha ahaatee, Madaxtooyadda ayaa boqolaal kun bixinaysa xubnahaan, xilli bulshada gobalka Mudug ay ka cabanayaan amni xumo iyo caafimaad daro.
XIGASHO: KASMAAL MEDIA
Musqmasuqa wa somali maheradeda.waxa meshas dhigay somaliya wa musuqmasuq.